Indlu yoodade abathathu kwisiXeko saseBatangas - I-Airbnb
Indlu yoodade abathathu kwisiXeko saseBatangas
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCeleste Marie
I-Apartment yoodade abathathu i-3-unit ibekwe kwindawo yokuqala kwisiXeko sase-Batangas ngokhuseleko lweeyure ezingama-24, engaxinananga, kwaye umgama wokuhamba ukuya kwindawo yokutyela kunye nebhari. Kwakhona yimizuzu emi-5 yokukhwela ukuya kwiHotele yeeDays kunye nePontefino Hotel kunye neSM Batangas City. Igumbi kunye nendawo yokuhlala ine-air conditioning. Ungapheka kwaye uhlambe. Indawo yethu yokuhlala lukhetho olugqibeleleyo, umgangatho ophezulu ngexabiso elifikelelekayo kakhulu
Ilungile ngokwaneleyo kusapho oluncinci ngexabiso elifikelelekayo kakhulu.
Indlu enemigangatho emibini. Igumbi lokuhlala (kunye ne-tv), ikhitshi kunye nendlu yangasese kunye nebhafu (eshushu / ebandayo) kumgangatho wokuqala kunye negumbi lokulala eliphezulu elinebhedi enkulu kunye ne-cignal tv kunye netafile yelaptop.
Imizuzu emi-5 ukukhwela ukuya kwi-SM City Batangas.
Umbuki zindwendwe ngu- Celeste Marie
Umninimzi uhlala ecaleni kwendawo. Undwendwe lunokunxibelelana nanini na nomninimzi nge-sms okanye ngokobuqu ngempelaveki.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Batangas